Ahoana ny fomba ampitahaina amin'ny mpivarotra 400 hafa? | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 7, 2014 Zoma, Aogositra 8, 2014 Douglas Karr
Nihaona tamina orinasa orinasa tsy ela akory izay izahay. Manana ny fanamby rehetra azonao eritreretina izy ireo - ekipa kely, firafitry ny orinasa, franchise, ecommerce… ny asa. Rehefa nandeha ny fotoana dia nivoatra niaraka tamin'ny ekipany kely izy ireo ho any amin'ny toeram-ponenan'ny haitao izay nanjary sarotra kokoa ny nitantana azy ireo. Ny asanay dia ny mametraka ny paikadin'izy ireo ary hampihena ny vidin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanodinana sy fampiasam-bola amin'ny vahaolana malefaka. Tsy asa ho an'ny torana fo izany.
Rehefa mipetraka eo amin'ny latabatra isika, matetika ny ekipa dia samy sadaikatra sy sorena amin'ny maro amin'ireo banga navelany hisokatra na ny tsy fisian'ny hafainganam-pandehan'izy ireo amin'ny fampiasana teknolojia vaovao. Toa isaky ny mihaona amin'ny orinasa iray aho dia manana izany fihetsika izany ny ekipan'izy ireo. Ny harena ara-barotra dia lafo vidy amin'ity toekarena ity ary tsy tokony ho menatra ny orinasa fa tsy maharaka. Mihazakazaka haingana ny indostria, ary ny sehatra saika mandrakariva dia miady amin'ny dolara marketing - mampisavoritaka ny mpivarotra efa voasintona amin'ny lafiny rehetra.
Raha jerena izany dia mahafinaritra foana ny mahatsapa toa tsy manao ratsy loatra ianao. Ity tetik'asa fikarohana midadasika avy any amin'ny Ektron ity dia hanampy anao hilamin-tsaina… ary mety hahatonga anao hahatsapa ho tsara momba ny fandrosoana nataonao sy ny sori-dalana izay raisinao. Mety ho eo alohan'ny fiolahana angamba ianao!
Ektron dia nanao tetik'asa fikarohana lehibe hahafantarana tsara ny fiovana sy ny fironana amin'ny Marketing Digital sy ny Teknolojia Marketing amin'ny taona 2014. Nanontany ny mpivarotra, ny matihanina IT, ny mpamorona ary ny mpanoratra atiny amin'ny orinasa manerana ny indostria isan-karazany ny fahitany ny paikady sy ny fironana nomerika izy ireo. Tranokala 400 sy matihanina maso ivoho nomerika nanome ny heviny.
Ny infographic dia mamakivaky ny pejy fitobiana sy ny fampiasana antso-to-hetsika, ny famoronana atiny, ny fanatsarana ny motera fikarohana, Analytics, marketing amin'ny haino aman-jery sosialy, marketing anaty, personalization, target, marketing amin'ny finday, fampidirana, fanandramana a / b, famolavolana tranonkala mamaly ary raha ampiharina izy ireo izao, kasaina hampiharina, na hampiharina atsy ho atsy. Ny fehiny dia misy fanamafisana amin'ity taona ity famoronana atiny, lasibatra ary personalization.
Tags: ab testingAnalyticsfampiasana antso-to-hetsikafamoronana votoatyctampandraharahamasoivoho nomerikafampiharana marketing nomerikadinikateknolojia marketing nomerikapaikady nomerikaektronmampihiditra barotrafampidiranaMatihanina ITpejy pejympivarotrafampiharana marketingbarotra tetikateknolojia marketingFivarotana finday sy tablettefinday-barotrapersonalizationfamolavolana tranonkala mahalianafikarohana OptimizationSocial Media Marketinglasibatra
Aug 26, 2014 amin'ny 5: 27 AM
Tena mahatalanjona ny infografika ..